Zvii Zvinobvumirwa Nomutemo paSabata?| Upenyu hwaJesu
SARUDZA MUTAURO Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian French Ga Georgian Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Isoko Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Moore Myanmar Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uzbek Vietnamese
Zvii Zvinobvumirwa Nomutemo paSabata?
MATEU 12:9-14 MAKO 3:1-6 RUKA 6:6-11
KUPORESA RUOKO RWEMUMWE MURUME PASABATA
Jesu anoenda kune rimwe sinagogi, zvichida muGarireya, uri musi weSabata zvekare. Anoona mumwe murume ane ruoko rwakakokonyara. (Ruka 6:6) Vanyori nevaFarisi vakanyatsotarisa Jesu. Vari kudei? Vanobudisa zviri mupfungwa dzavo pavanobvunza kuti: “Zvinobvumirwa nomutemo here kurapa pasabata?”—Mateu 12:10.
Vatungamiriri vechitendero chechiJudha vanotenda kuti mutemo haubvumiri kurapa paSabata kunze kwekunge munhu ava kuda kufa. Somuenzaniso vanoti hazvisi pamutemo kuti munhu atwasanudze pfupa ratyoka kana kuti asunge panenge paminyuka paSabata, sezvo ikoko kusiri kukuvara kungauraya munhu. Zviri pachena kuti vanyori nevaFarisi havasi kubvunza nekuti vari kunzwira tsitsi murume uyu ari kutambura. Vari kuda kutsvaga pekuwanira Jesu mhosva.
Asi Jesu ari kuziva kuti vakarasika. Anoziva kuti zvinhu zvavari kuti zvinorambidzwa paSabata hazvisiri izvo zvinotaurwa neMagwaro uye zviri kuita kuti vanhu vaomerwe nekurichengeta. (Eksodho 20:8-10) Vamwe vanhu vakatomboshora mabasa ake akanaka aari kuita paSabata. Jesu ava kuda kuvaratidza kuti maonero avo haana kururama. Anoudza murume ane ruoko rwakakokonyara kuti: “Simuka uuye pakati.”—Mako 3:3.
Achitendeukira kuvanyori nevaFarisi, Jesu anoti: “Ndoupi munhu pakati penyu angava negwai rimwe chete uye, kana iro rikawira mugomba pasabata, angarega kuribata akaribudisa?” (Mateu 12:11) Gwai ipfuma saka hazviiti kuti munhu arisiye riri mugomba kusvikira mangwana nekuti anogona kurasikirwa nemari yakawanda kana rikafa. Uyezve Magwaro anotaurawo kuti: “Munhu akarurama anotarisira mweya wechipfuwo chake.”—Zvirevo 12:10.
Achiratidza kufanana kwazvakaita nenyaya iri mudariro, Jesu anoenderera mberi achiti: “Munhu anokosha zvikuru sei kupfuura gwai! Naizvozvo zvinobvumirwa nomutemo kuita chinhu chakanaka pasabata.” (Mateu 12:12) Saka Jesu anenge asina kutyora mutemo weSabata kana akaporesa murume uyu. Vatungamiriri vechiJudha vanoona pasina chekushora pamufananidzo wake saka vanoramba vakangonyarara.
Agumburwa asi achitorwadziwa nemafungiro avo asina kururama, Jesu anotarira-tarira vanhu varipo. Anobva ati kumurume weruoko rwakakokonyara: “Tambanudza ruoko rwako.” (Mateu 12:13) Paanongotambanudza ruoko rwake rwunobva rwangopora. Murume uyu anofara zvokufara zviya, asi vaya vari kutsvagira Jesu mhosva vanonzwa sei?
Pane kuti vafare kuti ruoko rwemurume uyu rwaporeswa, vaFarisi vanobva vabuda votanga “kurangana nevateveri vebato raHerodhi pamusoro pake, kuti vamuparadze.” (Mako 3:6) Bato iri rinofanira kunge riine dzimwe nhengo dzinobva muboka rechitendero chechiSadhusi. VaSadhusi havawanzowirirana nevaFarisi, asi apa vabatana kuti vapikise Jesu.
Jesu ari kupi uye izuva ripi? Chii chaanoona chinozoita kuti afumure mafungiro evatungamiriri vechitendero chechiJudha?
Vatungamiriri vechitendero chechiJudha vakarasika papi panyaya yemutemo weSabata?
Jesu akaratidza sei neuchenjeri kuti maonero aiita vaJudha Sabata akanga asina kururama?